စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားအတှကျ စကားလုံး (၃)လုံး | မာသငျ
စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားအတှကျ စကားလုံး (၃)လုံး
Good = ကောငျး။
Better = ပိုကောငျး။
Best = အကောငျးဆုံး။
Good — ကိုယျ့လုပျငနျးရဲ့ဘယျအရာ၊ဘယျအပိုငျးတှေ ကောငျးတယျလို့customer သုံးစှဲသူတှေ ပွောကွလဲ ?
Better — ဒီထကျ ပိုကောငျး အောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ ?
Best — အကောငျးဆုံး ဖွဈအောငျ ဘယျအရာတှပွေောငျးလဲ လုပျဆောငျရမလဲ ?
ကိုယျ့ ဝနျထမျးတှကေို မေးပါ။
ကိုယျ့ စားသုံးသူတှကေို မေးပါ။
ကိုယျ့ ကိုယျကို မေးပါ။
(၃) လုံး ပါပဲ။
(၃) လုံး ဆိုပမေယျ့ .. ၃ သိနျးမက တနျပါတယျ။
စီးပှား ဒိုငျယာရီ မှတျစုမြား
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စကားလုံး (၃)လုံး
Good = ကောင်း။
Better = ပိုကောင်း။
Best = အကောင်းဆုံး။
Good — ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ဘယ်အရာ၊ဘယ်အပိုင်းတွေ ကောင်းတယ်လို့ customer သုံးစွဲသူတွေ ပြောကြလဲ ?
Better — ဒီထက် ပိုကောင်း အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
Best — အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဘယ်အရာတွေပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်ရမလဲ ?
ကိုယ့် ၀န်ထမ်းတွေကို မေးပါ။
ကိုယ့် စားသုံးသူတွေကို မေးပါ။
ကိုယ့် ကိုယ်ကို မေးပါ။
(၃) လုံး ပါပဲ။
(၃) လုံး ဆိုပေမယ့် .. ၃ သိန်းမက တန်ပါတယ်။
စီးပွား ဒိုင်ယာရီ မှတ်စုများ